भिडियो: ईन्द्रेणीले गुल्मी पुगेर सबैलाई यसरी रुवायो, भिडियो हेरेर नरुने को होला? – Gulminews
Home/भिडियो/भिडियो: ईन्द्रेणीले गुल्मी पुगेर सबैलाई यसरी रुवायो, भिडियो हेरेर नरुने को होला?
भिडियो: ईन्द्रेणीले गुल्मी पुगेर सबैलाई यसरी रुवायो, भिडियो हेरेर नरुने को होला?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ भाद्र २०, शुक्रबार ०२:१५ मा प्रकाशित
भदौ २० । एबिसी टेलिभिजन मार्फत प्रसारण हुने चर्चित कार्यक्रम ईन्द्रेणीले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा पुगेर छायाँङ्कन गरेको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सांगितिक मनोरन्जनको साथसाथै विभिन्न दु:ख पिडामा रहने दुखी पीडितहरुको उद्दार तथा समाजिक गतिविधिहरुमा सघाउंदै आएको इन्द्रेणी टिम गत महिना गुल्मी पुगेको थियो । सत्यवतीमा गत महिना गएको भीषण पहिरोबाट पीडितको लागि सहयोग सहित सांगितिक कार्यक्रम लिएर ईन्द्रेणी गुल्मी पुगेको थियो ।
देश-विदेश मा छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरुको मन मुटुमा बस्न सफल कार्यक्रम ईन्द्रेणी सर्वाधिक हेरिने नेपाली कार्यक्रम मध्य पर्दछ । खास गरि प्रवासमा रहनुहुने दाजुभाई दिदि बहिनीहरुको मन जित्न सफल कार्यक्रम ईन्द्रेणीको सिंगो टिम प्रवासबाट पठाईएको सहयोग लिएर गुल्मी पुगेको थियो । गुल्मी ग्वादी जन्मथलो भई हाल दुबईमा रहेका छत्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा संकलित सहयोग रकम हस्तान्तरणको क्रममा ईन्द्रेणी गुल्मी पुगेको हो । कुँवरको अलावा बिभिन्न देशबाट पठाईएको सहयोग पनि ईन्द्रेणीका संचालक कृष्ण कंडेलले आफु सँगै लगेर गएका थिए ।
१३ जनाको ज्यान जाने गरी गएको भीषण पहिरोमा सयौँ यतिबेला पनि बिस्थापित छन् । घटनासँग मिल्दो गीत गाउँदा उपस्थित सबैको आँखा रसाएका थिए । सुन्नेको त रसायो नै, गाउनेको पनि ओभाना रहेनन् । टि.भी र युट्युबमा भिडियो हेरेर पनि नरुने कोही भएनन् ।